L3 + Shintsha Abakhiqizi & Abahlinzeki - China L3 + Shintsha Ifektri
CS6200-52X-P-EI Dual Stack 10G 48 Izimbobo PoE Ethernet Shintsha
I-CS6200-52X-P-EI 10G switching yomzila we-PoE switch ine-hardware ethuthukile kanye nokwakhiwa kwesoftware. I-CS6200-52X-P-EI inikeza ukutholakala okuphezulu, ukusabalalisa, ukuphepha, ukusebenza kahle kwamandla, nokusebenza kalula ngezinto ezicebile ezifana ne-VSF, IEEE 802.3at / IEEE 802.3bt namandla kagesi angadingeki. Ilungele ukuhlangana kwabantu abaningi noma ungqimba oluyisisekelo kumanethiwekhi wekhampasi noma amanethiwekhi we-SMB. Izici ezibalulekile nokugqamisa i-60W PoE Amachweba okuqala angama-8 e-PoE asekela i-IEEE 802.3bt (60w). Bangaba ...
CS6200-28X-HI-24F Ukusebenza okuphezulu kwe-10G Full Fiber Ethernet Shintsha
I-CS6200-28X-HI-24F isizukulwane esilandelayo 10G switchable routing switch has advanced hardware and software design design, built-in modular 1 + 1 redundant supply supply. I-CS6200-28X-HI-24F inikeza ukutholakala okuphezulu, ukusabalalisa, ukuphepha, ukusebenza kahle kwamandla, kanye nokusebenza okulula ngezinto ezinamandla ezifana ne-VSF (i-Virtual Switch Framework), amandla kagesi angasebenzi kanye ne-OpenFlow. Ilungele ukuhlanganiswa kwabantu abaningi noma ungqimba oluyisisekelo lwenethiwekhi ye-campus, i-ISP, nebhizinisi. Izici ezibalulekile ne-Highl ...
CS6200-8G24S2Q-EI Dual Stack 40G Ethernet Routing Fibre Shintsha
I-DCN CS6200-8G24S2Q-EI ingu-L3 switching routing switch enamachweba we-40GE fiber uplink. I-CS6200-8G24S2Q-EI inokwakhiwa kwehardware nokwakhiwa kwesoftware, okwakhelwe ngaphakathi kokuphakelwa kwamandla okubili okungafuneki. I-CS6200 inikeza ukutholakala okuphezulu, ukusabalalisa, ukuphepha, ukusebenza kahle kwamandla, nokusebenza kalula ngezinto ezintsha ezifana ne-VSF (Virtual Switch Frame-work) namayunithi ama-fan angama-3 ahlelwe ngokuzenzakalela. Ilungele ukuminyana okuphezulu kwe-ag-gregation kumanethiwekhi we-Enterprise noma kumanethiwekhi we-Campus. Nge-SMB, CS62 ...